सावधान ! आज मौसम निकै खराब, वर्षा, चट्याङ, असिना र ठुलो हावाहुरी आउने ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/सावधान ! आज मौसम निकै खराब, वर्षा, चट्याङ, असिना र ठुलो हावाहुरी आउने !
काठमाण्डौ – आज देशका धेरैजसो ठाउँमा बादल लाग्ने र केही ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौस पुवाृनुमान महाशाखाका अनुसार दिउँसोपख धेरै ठाउँमा बादल लागेर केही ठाउँमा मेघगर्जन, चट्या*ङ र हावाहुरीसहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ ।
पश्चिमी वायूको प्रभावको कारण अहिले पश्चिम र मध्य क्षेत्रमा सामान्य र बाँकी क्षेत्रमा आंशिक बादल भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
पहाडी क्षेत्रका केही ठाउँमा असिना र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने सम्भावना पनि रहेको छ । शुक्रबार राति पनि पश्चिम र मध्य क्षेत्रका धेरै ठाउँ र पूर्वका केही ठाउँमा हावाहुरीसहित पानी पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।
आज राति पनि देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदली रहनेछ। पश्चिमी भू-भाग लगायत मध्य का धेरै स्थानहरूमा र पूर्वी भू-भागका केही स्थानहरुमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग र हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेकाे महाशाखाकाे भनाइ छ ।
भोलि शनिबार पनि देशका अधिकांश भू-भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने र देशका केहि स्थानहरूमा मेघ-गर्जन/चट्याङ्ग र असिना तथा हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
आगामी २४ घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै महाशाखाले पश्चिमी भू-भाग लगायत मध्यका धेरै स्थानहरूमा र पूर्वी भू-भागका केही स्थानहरुमा मेघ-गर्जन/चट्याङ्ग र असिना तथा हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्क रहन अनुरोध गरेकाे छ ।
अब सामान्य ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे पनि ५ हजार जरिबाना हुने नियम बन्दै
सिराहा कारागारका ५ सय १६ जनामा कोरोना संक्रमण